Ma dhabbaa in madaxweynaha Angola Dos Santos uu xilka ka dagayo? - BBC News Somali
Ma dhabbaa in madaxweynaha Angola Dos Santos uu xilka ka dagayo?
Maxaad kala socotaa xukunka iyo siyaasadda Angola
Dadka reer Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub. Balse inkasta oo madaxweynihii muddada dheer soo hoggaaminayay dalkaasi uu xilka ka dagayo, haddana isaga iyo xubnaha qoyskiisa uma muuqdaan in ay diyaar yihiin in ay awoodda baneeyaan.
Madaxweyne Jose Eduardo dos Santo oo 74 jir ah waxa uu dalka Angola madaxweyne kasoo ahaa tan bishii sebtembar 1979-kii, wuxuuna xilka hayay 38 sanno oo xiriir ah.
Inkasta oo midabada isugu jira guduudka, jaalaha iyo madoowga ee xisbigiisa ay ka muuqdaan meel kasta oo ka mid ah dariiqyada caasimadda dalkaasi ee Luanda, haddana waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya astaamaha xisbiyada mucaaradka oo iyaguna ka kooban buluug iyo jaalle.
Doorashada qofkii isaga badali lahaa ayaa ka dhigan dhacdo weyn oo taariikhi ah dalkan oo uusan waligiis soo marin madaxweyne aanan isaga ahayn.
Image caption Joao Lourenco oo ah ninka rajaynaya in uu baddalo madaxweyne Santos
Balse carruurtiisa ayaa xilal muhiim ah ka haya Angola, taasi oo wiiqeysa awoodda madaxweynaha xilka la wareegi doona, wayna adagtahay in uu meesha ka boxo Dos Santos.
Inkasta oo dadka qaarkood ay ku ammaanaan in dalkiisa uu soo kabto ka dib dhammaadkii dagaalkii sokeeye sannadkii 2002-dii, haddana qaar kale ayaa ku eedeeyey in uu xili dheer kursiga ku dheganaa.
Waa madaxweynaha labaad ee xiligii ugu dheeraa kursiga ku fadhiyey adduunka marka laga soo tago Teodoro Abiang Nguema ee dalka Equatorial Guinea.
Waxaa jirey warar la'isla dhexmarayay oo ku saabsan in uu caafimaadkiisu liito ka dib markii uu u safray dalka Spain sababo caafimaad dartood, isaga oo mar labaad ku laabtay bishii hore.
Hadal haynta ayaa gaartay heer illaa gabadhiisa oo lagu magacaabo Isabel ay hadal qoraal ah soo dhigto boggeeda Instagaram oo ay ku beenineyso in uu dhintey aabaheed.
Maxay tahay sababta ay hoggaamiyayaasha Afrika dibedda ugu aadaan caafimaad?
Bishii feberaayo ayuu Dos Santos shaaciyey in uusan markale isu soo sharixi doonin doorashada madaxtinimo ee dalkaas, wuxuuna sheegey in badalkiisa uu xisbiga talada haya u tartami doono wasiirka gaashaandhigga Joao Lourenco.
Hase yeeshee Dos Santos wuxuu sii ahaan doonaa guddoomiyaha xisbiga MPLA, waxaana la wiiqay awoodda madaxweynaha cusub ee iman doona.
Image caption Inkastoo ay qoysaska qaar sabool yihiin haddana calanka xisbiga talada haya ayaa guro badan suran
Bil uun ka hor doorashada, baarlamaanka Angola waxa uu ansixiyey sharci madaxweynaha ka hor istaagaya in uu shaqada ka eryo taliyeyaasha ciidammada militariga, booliiska iyo nabad sugidda muddo siddeed sano ah.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale Dos Santos kursi ka siiyey Golaha Sare ee Qaranka, xilkaasi oo siinaya xasaanad buuxda oo ah in aanan lagu soo oogi karin wax dacwad ah.
Dalka wuxuu ku maamulayaa caruurtiisa
Carruurta uu dhalay Dos Santos waxa ay dalka ku leeyihiin awoodo waaweyn marka laga reebo gabadhiisa Isabel oo ah haweeneyda ugu taajirsan Afrika sida ay shaacisey majaladda Forces ee diiwaangalisa dadka taajiriinta ah.
Bilyan dheer ayay ahayd markii aabaheed u magacaabayay madaxa shirkadda shidaalka qaranka ee Sanangol.
Waa xil awoodiisu sarayso, sababtoo ah Angola waxa ay kaalinta koobaad ee shidaalka soo saarista kula tartamaysaa Nigeria qaarada Afrika dalalka shidaalka dhoofiya.
Image caption Isabel dos Santos oo ah gabadha madaxweynaha oo hodan ah ayaa diiday in ay dhaqaalaha ka heshay xukuumadda
Wiilka uu dhalay madaxweynaha, Jose Filomeno ayaa isaga loo magacaabay in uu madax ka noqdo sanduuqa hantida dibadda oo ah sanduuq loogu talogalay in lagu maalgashado dalka Angola.
Wiil kale oo uu dhalay oo lagu magacaabo Jose Paulino ayaa ah heesaa caan ah, wuxuuna soo saare ka yahay barnaamij caan ah oo taleefishinka ah, mar la waraystey sannadkii 2013kii ayuu sheegey in magaca qoyskiisa uu saamayn xun ku yeeshey, maadaama dadka qaarkood ay diideen in ay heesihiisa iibsadaan sababo siyaasadeed awgood.
Waxaa jira misna wiil kale oo uu madaxweynaha dhalay oo lagu magacaabo Eduane Danilo dos Santos, kaasi oo diiradda warbaahinta Angola soo fuuley bishii May ka dib markii uu carwo xaraash ah ka iibsaday saacad qiimaheedu ahaa $587,000 doolar.
Carwada xaraashka oo ahayd mid samofal loogu talogalay ayaa waxaa hormuud ka ahaa atooraha caanka ah ee Maraykanka Will Smith kaasi oo la duubey isaga oo layaaban lacagta uu wiilka yar bixiyey.
Sidee wax loo doortaa dalka Angola?
Qof kasta oo muwaadhin Angola u dhashay oo gaaray 18 jir , islamarkaasina isu diiwaangaliyey doorashada waa uu codeyn karaa
Codbixiyeyaasha si toos ah uma soo dooranayaan madaxweynaha, ee guddoomiyaha xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka ayaa madaxweyne noqonaya
Dastuurkii la qorey 1992-dii ayaa dhigaya in madaxweynaha toos loosoo doorto, balse dastuur la meelmariyey 2010-kii ayaa arrintaasi meesha ka saaray.
Xildhibaanada waxaa la doortaa muddo 5 sanno ah.
Dhacdooyinka la mid ah tan uu wiilkiisa sameeyey oo kale ayaa ka dhigaya Madaxweyne Dos Sandos in uusan hantida dalka wada gaarsiinin shacabka.
Markii uu gabadhiisa u magacaabay in ay madax ka noqoto shirkadda shidaalka dalkaasi, hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International ayaa ku eedeysey Dos Santos in uu sameeyey eex.
Angola waa dalka 12-aad ee tusaha ama shaxda dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka.
Image caption Dabaqyada dhaadheer ee ku yaalla caasimadda Angola ee Luanda
Madaxweyne xigeenka Angola oo Bortaqiisku dacwad ku soo oogay
'Caasimadda Angola waa magaalada ugu qaalisan ee ay ajaaniib ku noolaadaan'
Yoweri Musevani : Waligay ma xanuunsanin intii aan madaxweynaha ahaa!
Dhaqaalaha waa mid ka mid ah moowduucyada ugu waaweyn ee doorashada lagu galayo.
Qiimaha maciishadda ayaa aad sare ugu kacay, iyada oo mid ka mid ah dadka caadiga ah uu BBC-da u sheegey in qiimihii 10 xabbo ah ee liin ah lagu iibsanayay 2 sano ka hor ay hadda goyso 7 xabbo oo liin ah.
Waxaa Angola ka jira saboolnimo aad u baahsan, gaar ahaan caasimadda oo dadka qaar ay u arkaan meelaha ugu qaalisan adduunka. Waxaase la isweeydiinayaa sida Santos uu dadkiisa oga saari karo gaajada.